घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू हेटिमे जिएच बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
हाम्रो हाकिम जियाच बायोग्राफी तथ्यहरूले उनको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, पारिवारिक जीवन, प्रेमिका / पत्नी, व्यक्तिगत जीवन र जीवनशैली को पूरा कभरेज दिन्छ। यो उनको जीवन कहानी को एक पूर्ण विश्लेषण हो, आफ्नो युवा अवस्था देखि शुरू, जब उहाँ प्रसिद्ध बने।
हाकिम ज़ियाचको जीवन कहानी।
हो, फुटबल प्रशंसकहरु राम्रो सेट टुक्रा लिन र राम्रोसँग dribble आफ्नो क्षमता थाहा छ। यद्यपि धेरैले हकिम ज़ियाचको जीवनी सुनेका वा पढेका छैनन्। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
हाकिम जियाछ बचपन कहानी:
सुरु गर्नका लागि, ह Hakim Ziyech मार्च १ 19 1993 March को १ Netherlands औं दिन नेदरल्याण्ड्सको ड्रोन्टेनमा जन्म भएको थियो। उहाँ मोरोक्कोकी आमा र उनको डच बाबामा जन्मिएका children जनामध्ये कान्छी हुनुहुन्थ्यो।
जवान जीचेक आफ्नो गृहनगर ड्रोन्टेनमा हुर्किए। उनका ठूला भाई, फौजी जियाच, बहिनी जोम याम र other अन्य भाई बहिनीहरू हुन् जसलाई मे २०२० सम्म धेरै थाहा छैन।
हाकिम जियाच नेदरल्याण्ड्सको ड्रोन्टेनमा हुर्किए।
हाकिम जियाछ बढ्दो वर्ष:
ड्रोन्टेनमा हुर्केका, जवान जिएच केवल पाँच वर्षको बच्चा थिए जब उनले आफ्ना ठूला भाइहरूसँग त्यस समयमा उत्कृष्ट सडक फुटबल खेलाडीहरूसँग सडक फुटबल खेल्न शुरू गरे।
हाकिम जियाछ पारिवारिक पृष्ठभूमि:
भाइको फुटबलप्रतिको प्रेम एक गरीब परिवारबाट आएको हो भन्ने तथ्यमा परस्पर जोडिएको हुँदैन। त्यस्तै, फुटबल खेल्ने र स्कूल जाने गतिविधिहरू थिए जुन उनीहरूको लागि उज्जवल भविष्यको कुरा हो। जिएचका आमाबुबालाई खेल खेल्नमा कुनै समस्या थिएन जब उनका बहिनीहरूले उनलाई राम्रो ध्यान दिएका थिए भन्ने कुरा सुनिश्चित गरे।
हाकिम ज़ियाचका आमा बुबा मध्ये एक जनालाई भेट्नुहोस्।
हाकिम ज़ियाच जीवन कहानी- फुटबलको साथ शुरुआती वर्षहरू:
जियाच १० बर्षको उमेरमा, उनले आफ्नो बुवालाई गम्भीर बिमारी (मल्टिपल स्क्लेरोसिस) बाट गुमाए। उसको केटाको बुबाको मृत्यु एक अत्यन्तै स्तब्ध पार्ने घटना थियो जसले उनलाई र उनको परिवारलाई जीवन कठिन बनायो।
जब जिएचले अन्ततः झटका पार गरे, उनले एससी हीरेनवीनसँग प्रशिक्षण लिएर फुटबलमा क्यारियर निर्माण शुरू गरे। प्रशिक्षणलाई धन्यवाद छ, त्यसबेलाको १ years बर्षको उमेर आफ्नो परिवारको आर्थिक सहयोगमा कम सहयोगी हुन सकेको थियो।
फुटबल खेलाडीले १ SC वर्षको उमेरदेखि एससी हीरेनवीनसँग प्रशिक्षण सुरु गरे।
हाकिम जियाच जीवनी- शुरुआती करियर जीवन:
एससी हीरनवीनमा युवाको क्यारियरले खराब मोड लियो जब उनी प्रशिक्षणमा अनियमित भए र कुनै समय उनले आफ्नो टीमका साथी र प्रशिक्षकहरूको अनादर गरे। यदि अजीज डोफिकारले उहाँसँग कुनै अनुरोध गरेन भने विकासले उनको फुटबल आकांक्षालाई अन्त्य गर्न सक्थ्यो।
यो याद गर्नु उपयुक्त छ कि डुफिकर एरिडिभिसीको इतिहासमा पहिलो मोरक्को समर्थक खेलाडी हुन्। जिएचसँगको उनको सम्बन्ध एससी हेरेनवीनसँग प्रशिक्षण सुरु गर्नु भन्दा पहिले देखि नै फिर्ता गयो। वास्तवमा, उहाँ जियाचका बुबा हुन् र एक पटक उनलाई कसरी इनडोर फुटबल खेल्ने सल्लाह दिन्थे। लेखकले हाकिम ज़ियाचको जीवनीको मस्यौदा बनाउँदा लिजेन्डले विशेष मान्यता लिन्छ।
डोफिकार (बायाँबाट दोस्रो) उनको सल्लाह दिए (दाँया देखि दोस्रो खडा) इनडोर फुटबल सहित सबै क्षमतामा।
हाकिम जियाच जीवनी - फेम कहानी प्रख्यात:
डुफिकरको हस्तक्षेप र राम्रो सल्लाहलाई धन्यवाद, जियाचले एससी हीरेनवीनसँग अर्को मौका पायो र यसबाट राम्रो बनायो। क्लबको श्रेणीमा उनको वृद्धि उल्कास्पद थियो, जुन २०१२ को अगस्ट २०१२ मा एनईसी निजमेगेनको बिरुद्ध २-०को हारको बखत आफ्नो एरेडिभीको डेब्यूमा पुगेको थियो।
जिआचको एरेडिभी डेबुट पछि, उनले पेशेवर फुटबलमा के हासिल गर्न सक्थे भन्ने कुराको अन्त्य थिएन। तथ्या that्क जसले उनीको लागि भविष्यको भविष्यको कुरा गर्‍यो, एफसी ट्वेन्टेको ध्यानाकर्षण भयो जुन २०१fi मा मिडफिल्डरमा हस्ताक्षर गर्न द्रुत थियो।
२०१C मा उनको आगमनको पुष्टि गर्ने एफसी ट्वेन्टेको एक दुर्लभ तस्बिर।
हाकिम जियाच जीवनी - प्रख्यात कथा उठ्नुहोस्:
त्यसपछिको स्थानान्तरणहरूले एफिस ट्वेन्टेमा रोचक २ बर्षे क्यारियर पछि २०१ Z मा जियाच एजेक्सको खेलाडी भएको देखे। धेरै समय भएको थिएन जब जियाचले डच फुटबल, यूरोपा लिगका साथै च्याम्पियन लीगमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि एजेक्समा प्रशंसकहरूको मन जित्यो।
हाकिम जियाचको जीवनीमा यो मस्यौदा लेख्ने समय भन्दा छिटो, उनको सेवाहरू चेल्सी एफसी द्वारा सुरक्षित गरिएको छ जहाँ उनी एक हुन आशा गर्दछन्। प्रिमियर लिगमा रचनात्मक मिडफिल्डर्स जस्तै जोओओ माउन्टिनो, ईसाई एरिक्सन, बर्नार्डो सिल्वा अरु मध्ये।
हाकिम जिएचको प्रेमिका को हो?
जबदेखि हकीम जियाछ प्रसिद्धिमा उत्रिए, कुनै पनि प्रेमिकाले उसको बढ्दो शीर्ष फार्म र प्रासंगिक फुटबलमा प्रासंगिकतामा भूमिका खेले कि भनेर निर्धारण गर्न कोसिस गरिएको छ। मेला २०२० सम्म खोजले कुनै फाइदाजनक नतिजा प्राप्त गर्न सकेन किनकि जिआचले आफ्नो व्यक्तिगत र निजी जीवन गोप्य राखेका छन।
जेआइक गोप्य रूपमा ब्याग वा प्रेमिकाको साथ डेटि might गर्ने सम्भावनाको बारेमा विचारहरू फरक छन्, तर एउटा कुरा स्थिर रहन्छ; ऊ अझै कुनै आइमाईको साथ गल्लीमा हिंडिरहेको छ र कुनै छोरा (हरू) वा छोरी (हरू) विवाहबाट बाहिर छ।
हकीम जियाच सम्भवतः लेखेको समयमा एकल छ।
हाकिम जियाचको पारिवारिक जीवन:
हाकिम जियाछको जीवन कथामा परिवारले महत्त्वपूर्ण चरण लिन्छ। वास्तवमा हामी मिडफिल्डरको जीवनी सही ढंगले आफ्नो परिवारको बारेमा कुरा नगरी ड्राफ्ट गर्न सक्ने कुनै तरिका छैन। हामी तपाइँलाई हकीम जियाचको पारिवारिक जीवनको बारेमा तथ्यहरू तिनिहरूको आमा बुबाबाट ल्याउँदछौं।
हकीम जियाचको बुबाको बारेमा:
हाकिम जियाच एक डच बाबाको जन्म भएको थियो जुन कान्छो बच्चा भएको कारण उनी धेरै नजिक थिए। यसैले, जब उनी २०० 2003 मा मरे, Ziyech भावनात्मक व्याकुल थियो। जिएच आफ्नो बुबाको बारेमा राम्ररी चर्चा गर्दछ जब अवसरले प्रस्तुत गर्दछ। यो एक संकेत हो कि खेलाडी को एक भाग आफ्नो बुबा सम्झना गर्दछ।
हाकिम ज़ियाचकी आमाको बारेमा:
जिआचकी आमा मोरक्कोको नागरिक हो। उनले आफ्नो श्रीमानको मृत्युपछि जिएच र उनका s जना भाई बहिनीहरूलाई हुर्काउन सक्दो प्रयास गरे। उनको प्रयास र समर्थन जिएचको हृदयमा सँधै ताजा छ जसले विशेष अवसरहरूमा उनको प्रशंसा गर्न कहिल्यै बिर्सदैन।
हाकिम जियाछ आफ्नो मायालु आमा संग।
हाकिम जियाछ भाईबहिनीका बारे:
हाकिमको एक जेठो भाई छ जो फाउजी जियाछ नामबाट जान्छ। ऊ भाईबहिनी मध्ये एक हो जसले ज्याछको बाल्यकाल कहानीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। फाउजीले आफूलाई जिएचलाई फुटबल प्रशिक्षणमा लगे र उनलाई एससी हीरेनवीनमा आफ्नो क्यारियर निर्माणको क्रममा एक पाहुना परिवारको देखभालमा राखेर ठूला भाईको भूमिका खेल्ने काम गरे। हाकिमको अर्को ज्ञात भाई बहिनी उसको जेठी बहिनी जाम या हो। हामीलाई मात्र थाहा छ कि 'जाम या' उनको निक हो किनभने जिआचले उनीबारे अन्य कुनै कुरा गरेका छैनन्।
हाकिम ज़ियाचको जेठी बहिनीलाई भेट्नुहोस्।
हाकिम ज़ियाचका आफन्तहरूका बारे:
हाकिम जियाछ निकट परिवारबाट धेरै टाढा आफ्नो पुर्खाको बारेमा खास रूपमा चिनिदैन किनकि यो हजुरबा हजुरआमासँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै, उसका काका र काकीको बारेमा धेरै ज्ञात छैन, विकास जुन उहाँ आफ्ना काका र भतिजालाई लागू हुन्छ। जे होस्, ऊसँग अनीसा भनेर चिनिने सुन्दर भान्जी छ।
हाकिम ज़ियाचको प्यारो भतीजी अनिसालाई भेट्नुहोस्।
हकीम जियाछ व्यक्तिगत जीवन:
कुन कुराले फुटबलरलाई टिक बनाउँछ? हामी तपाईं उसको पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न मद्दतको लागि उहाँको व्यक्तित्वको मेकिंगहरू ल्याउँदा हामी पछाडि बस्नुहोस्। सुरुमा, Ziyech व्यक्तित्व मीन राशि चक्र लक्षण का एक मिश्रण हो। उहाँ संवेदनशील, भावनात्मक हिसाबले संचालित र रचनात्मक हुनुहुन्छ। थप रूपमा, Ziyech हास्यास्पद छ र कहिलेकाँही टिप्पणीको साथ कुटिल।
ऊसँग केवल केहि रूचिहरू र शौकहरू छन् जसमा आफ्ना साथीहरू र अभिभावकहरूसँग गुणस्तरीय समय बिताउनु, पौंडी खेल्न र निदाउँदा जब उनी आफूलाई तनावबाट मुक्त हुन आवश्यक महसुस गर्छन्।
पूल खेल्नु उसको सोख हो।
हकीम ज़ियाचको जीवनशैली:
के तपाईंलाई थाहा छ जियाछको $ million मिलियन भन्दा बढीको सम्पत्ति छ र शीर्ष उडान फूटबल खेल्नको लागि तलब र ज्यालाको रूपमा घरको महत्वपूर्ण तलब लिन्छ? ऊ एक विलासी जीवनशैली बिताउँछ जुन आफ्नो खर्च ढाँचा ट्र्याक गर्न सजिलो बनाउँदछ।
नेदरल्याण्ड्सको ड्रोन्टेनमा जाइचको घरको मूल्यको बारेमा धेरै कुरा थाहा छैन, तर हामी जान्दछौं कि एउटा मर्सिडीज बेन्ज र लाम्बोर्गिनी उरुस उसको कार संग्रहमा विदेशी सवारीको हिस्सा हो।
ऊ अक्सर आफ्नो मर्सिडीज बेन्जमा सवार हुँदा।
हाकिम जियाच तथ्य:
हाम्रो हाकिम जियाइचको बाल्यकाल कहानी र जीवनी समेट्न, यहाँ उहाँ बारे कम ज्ञात तथ्यहरू छन्।
तथ्य # १ - राजदूत:
के तपाईंलाई थाहा छ Ziyech Drontense SOEP परियोजना को लागी एक राजदूत हो! (Samen Op Expeditie भेट Poen)। यस परियोजनाले समस्याग्रस्त युवाहरूको जीवन निर्धारण गर्न सहयोग पुर्‍याउँदछ।
उहाँ सोप प्रोजेक्टको एक राजदूत हुनुहुन्छ।
तथ्य # २ - धर्म:
हाकिम ज़ियाचका आमा बुबाले उनलाई इस्लामिक तरीकामा हुर्काए। ऊ धर्मको प्रगाढ अनुयायी हो र दिनमा5पटक प्रार्थना गरेर यसको धर्म प्रचार गर्छ। उनी अन्तर्वार्ताका बखत धार्मिक कुरा बोल्ने ब्यबहार पनि गर्छन्।
तथ्य #3- फिफा रैंकिंग:
हामीले फुटबलमा थाहा पाएका रचनात्मक मिडफिल्डर्ससँग राम्रो रेटिंगहरू हुन्छन् जुन उनीहरूको विशेषज्ञताको राम्रोसँग बोल्दछन्। Ziyech उसको 865अ of्कको उचित रेटिंगको साथ छुट छैन। जहाँसम्म, प्रशंसकहरूको राय छ कि Ziyech ले स्तर अप गर्न more थप बिन्दुहरूको हकदार छ केविन डी ब्रुने जोसँग overall १ अ of्कको प्रभावशाली समग्र रेटिंग छ।
तथ्य #4- ट्रिभिया:
Ziyech आफ्नो जन्म वर्ष साझा - १ that 1993 that एकै वर्ष अस्तित्वमा आईरहेको धेरै प्राविधिक प्रगति संग। वर्ल्ड वाइड वेब १ 1993 1993 in मा CERN मा जन्म भएको थियो जबकि इन्टेलले पेन्टियम माइक्रोप्रोसेसरको परिचय सोही वर्ष थियो। मनोरञ्जन दृश्यमा, १ XNUMX XNUMX the मा सिन्डलरको सूची र जुरासिक पार्क जस्ता चलचित्रहरूले सिनेमा प्रर्दशन गरे।
हाकिम जियाछ बचपन कहानी र जीवनी तथ्यहरूको भिडियो सारांश:
हाकिम ज़ियाच जीवनी - विकी डाटा
पुरा नाम ह Hakim Ziyech
निक नाम राजालाई सहयोग गर्नुहोस्
जन्म मिति 19 मार्च को 1993th दिन
जन्मस्थान नेदरल्याण्डमा Dronten
उमेर १ ((मे २०२० को रूपमा)
प्ले गर्दै मिडफिल्डर
आमाबाबुले N /
भाई बहिनीहरू फाउज़ी ज़ियाच (जेठो भाई), जाम या (ठूली दिदी)।
सोख पूल खेल्दै, निदाइरहेको छ र परिवार र साथीहरूको साथ ह्या hanging आउट गर्दै।
उचाइ Feet फिट, inches इन्च
हाकिम ज़ियाचको जीवनीमा हाम्रो तथ्यात्मक लेखोट पढ्नका लागि धन्यबाद। Lifebogger मा, निष्पक्षता र सटीकता हाम्रो वाचवर्ड हो। त्यस्तै, तपाईले टिप्पणी बाकसमा सन्देश छोड्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ यदि तपाईले यस लेखमा ठिकै नदेखिने जस्तो देखिन्छ भने।
विक्टर Wanyama बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
परिमार्जित मिति: अक्टोबर,, २०१ 27
परिमार्जित मिति: नोभेम्बर 12, 2020